သာသနာ့ ယမကာသဂျီး Kai | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သာသနာ့ ယမကာသဂျီး Kai
သာသနာ့ ယမကာသဂျီး Kai
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 27, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 14 comments
သဂျီးဦးခိုမ် ရေးသား၍ သဂျီးဂဒေါ် မဒမ်ဗရောင်း ထုတ်ဝေသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာအဆစ် စာအုပ်ထွက်ရာ နားမလည် ပါးမလည် ဝယ်သူများ ပိုက်ဘောမိကုန်သည်။ အကြောင်းမှာ အာရေဗျ၊ အူရဒူ၊ ဖာစီ၊ ဘင်္ဂါလီ ဘာသာတို့နှင့် ရေးထားသောကြောင့်ဖြစ်၏။ အတော်ဆိုးတဲ့လူ ပိုက်ဆံရှာတာ ရိုးရိုး မရှာဘူး၊ ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ်တယ် !@#$%.. အေးလကွာ ငါလဲအဟုတ်မှတ် ဝယ်မိတာ တေဇမ်း..။ ပွစိပွစိ ဆူညံပွက်သံ လျှံထွက်လာသည်…. သဂျီးကတော့ သူမဟုတ်သလို အေးအေး ဆေးဆေး ခလေးမွေး.. နောက်သာမီးလေးတယောက် ယူရန်ပင် စိုင်းပြင်းနေသည်..။
အဒဲ့ကောင် ခံပေါ့ကွာ.. အသနားဘူး။ ခွီးထဲမှ ပြောတိုင်းယုံ ရောင်းတိုင်းဝယ် မေးတိုင်းဖြေ.. ဟေ့ သခင်ဆိတ် မွေးဂျပါကွ… နို့သောက်၊ အသားစားလို့ရတယ်.. ကရိကထလည်း အများဘူး။ စားချိန်တန် ကွင်းထဲလွှတ်.. အိပ်ချိန်တန် ခြံမောင်းသွင်းယုန်ဘဲ။ သားပေါက်တကောင် ငါးထောင်၊ ဆယ်ကောင် တကောင်အပိုပေးတယ်…။ စာအုပ်အဝယ် ရောက်လာသူများ တွေဝေကုန်သည်။ ဆိတ်နှင့်စာအုပ်တန်ဖိုး တူနေ၍ဖြစ်သည်..။ ထိုအချိန်ဝယ် အနားရှိ လဖက်ရည်ဆိုင်မှ ထွန်းအိန္ဒြာဘို သီချင်းပျံ့လွင့်လာသည်။ မီးနဲ့ရေ ဘယ်ဟာကို ရွေးမဲ.. အိုးနာနာ ဒူးနာနာ…..။
ဖလော်ရှော်ပါ မာမွတ်ခိုမ်၏ deadသန
လုပ်သားပြည်သူကျီးခင်ဗျား.. ဒီစာအုပ်ဟာဆိုရင် မက္ကာမြို့နေ ကျနော် သခင်ဂျီး အာယာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ် ကိုယ်တိုင် ကိုဘေးနွားဂျီး ဆယ်ကောင်တိတိ မီးကင်ပြီး နေ့ညမအိပ် ဘီယာလေးစုပ် နွားကင် မြည်းလိုက်နဲ့ အပတ်တကုပ် ရေးသားစီမံထားတာ ယုံကြပါ။ ဒဂယ်ဗာဗျာ.. ဟောသည့် ပုတ်လောက်ရှိတဲ့ ဘီယာဗိုက်ကြီးဟာ ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေပါဗဲ..။ ဘီယာဗူးခွံတွေကတော့ ရောင်းစားလိုက်လို့ အရှိဒေါ့ဘူး….. သို့ပေသိ နွားရိုးတွေ အမှိုက်ပုံမှာ ရှိပါအုံးမယ်။ မယုံရင် အမှိုက်ပုံသွား တူးကြည့်ဂျပါ…။ သဂျီးကား ဘီယာမူးမူးနှင့် စွတ်ပြောလေပြီ။ လုပ်ပုံကိုလည်းကြည့်အုံး.. မစဉ်းမစား.. စာအုပ်ရေတသိန်း ပုံနှိပ်ပြီး တအုပ်ငါးထောင်နှုန်းနှင့် သိန်းငါးထောင် အပွကြံခြင်းဖြစ်ရာ…….. တွက်ရေးမှာ စက်သူဌေး ထွက်ကြည့်တော့ မီးမလာ… ဆင်ခြင်တုံမဲ့လွန်းလှသည်.. သနားစရာ အလျဉ်း မလိုချေ….. ဒင်းထိုက်နှင့်ဒင်း ခွေးဖြစ်ဖြစ် ကြောင်ဖြစ်ဖြစ်.. တရုတ်ပြည်ဈေးကွက်သို့ ငါတဘို့ ကုမ္မဏီပိုင်ရှင် ကြေးမုံဂျီး မှတဆင့် အီတွန့်ဗွမ် စနစ်ဖြင့် ပို့ရန်သာ ရှိချေတော့သည်။ ဆာယိုနာတား သဂျီးရေ ဆာယိုနာတား.. :harr:
အော်… ဒဂျီးရေးတဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာအစစ်မျက်နှာဖုံးက အိုက်လိုလား..
ဘီယာအမူးလွန်ပြီး… အဲ.. (အခုဘီယာမသောက်တော့ကြာင်း.. ၀ိုင်ပြောင်းသောက်နေကြောင်း.. ) မေ့ကုန်ပြီ..
ကျွန်ဆိတ် လည်း ရှိသေးထင်ပါ့………
​ကော်​မရှင်​ ၅၀ % တဲ့ …
သဂျီး စာအုတ်ကို ကိုကြောင်ဂျီး ဗာသာပျံ ပေးဘာ…
ဥကျောင် စာကို ဖတ်အပီး
ဟိုကာတွန်းလေး တွားဒဒိရလိုက်မိဒယ် …။
ကာတွန်းထဲမှာ ဂျာနယ်ရောင်းဒဲ့လူကပေါ့ဗျာ ….
“၃၅၈ ယောက် လိမ်လည်မှုကြီး” ဆိုပြီး အော်ရောင်းနေဒယ် …
ဒီအခါ လမ်းသွားလမ်းလာ တစ်ယောက်က စိတ်ဝင်စားဘီး ဝယ်လိုက်ရော …
အဲ … သူလည်း ဝယ်ပြီး ကျောခိုင်းလိုက်ရော …
ရောင်းတဲ့လူက ဂုလို အော်လိုက်ပြန်တယ် ..
“၃၈၉ ယောက် လိမ်လည်မှုကြီး”
ကူတွက်ပေးကြပါဦး…. ၃၅၈ + ၁ = ၃၈၉ ????
ကွန်းမန့်ရေးတုံးက တစ်ယောက်တည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒီလူဒွေ နာ့ကွန်မန့် သေချာဖတ်ဂျောင်းး
အဒိက .. အိုက်ဒါ လိုဂျင်ဒါ …
ကွကိုယ်…ကန်းရင် ကန်းတယ်ပေါ့ ဖြစ်ပျက်နေလိုက်တာမပြောချင်ဘူး
သဂျိုးကြီး ဒီဟာနဲ့ ဒီဟာတောင်မပေါင်းတတ်မှတော့.. နင့်အတွက်
ဒို့သဂျီး အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်အားဖြည့်တယ် ပြောရမပေါ့
ဒီစာအုပ်ကို ကျနော်လည်း မဖတ်တတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ဖတ်တတ်တဲ့လူ
တစ်ယောက်ကို ဖက်ကြမ်း ဆေးလိပ်တစ်စည်း ပေးပြီး ဘာသာပြန်ခိုင်းလိုက်တာ….
မြန်မာဘာသာပြန်ပြီးသား PDF ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ရောင်းဈေးအတိုင်းပဲ
အလဂါးနဲ့ ပြန်လည်ဝေမျှ ချင်ပါတယ်……….
ရွာတူ ရွာတားဒွေကို အရဂါးပေးမယ်ချိုလား